Ungumnikazi Wesizinda Sakho! | Martech Zone
Ungumnikazi Wesizinda Sakho!
NgoMsombuluko, Januwari 8, 2007 ULwesibili, April 5, 2016 Douglas Karr
Enye yezinto ezintsha ze Blogger ukuthi ungasingatha uhlelo lokusebenza esizindeni sakho. (Ngibonile ukuthi banikela ngokusebenzisa ukungena ngemvume kwe-Akhawunti yakho ye-Google kungxenyekazi entsha, nakho. Kuhle lokho). WordPress inikeze ukusingathwa kwebhulogi yakho, yenza ngokwezifiso itimu yakho, ingeza ama-plugins, njll isikhashana manje. Ngikholwa ukuthi ngesinye sezizathu ezisemqoka zokuthi kungani ngikhethe i-WordPress… bengifuna ukuba nesizinda sami.
Inkinga ngokuqala ibhulogi yakho nokuyisebenzisa kwelinye lamapulatifomu amaningi, i-vox, i-typepad, Blogger, noma wordpress, ukuthi bangabakho abaphathi bakho, hhayi wena. Uthembele kumaseva abo, izinguquko zabo zepulatifomu, isikhathi sabo sokuphumula, konke! Ukuphela kwento onayo 'yizwi lakho.
Lokho akuyona inkinga enkulu uma ufuna nje ukugcina iphephabhuku laphaya. Kepha ukushintsha umqondo wakho emgwaqeni bese unquma ukuthi ufuna ukungathí sina ngokubhuloga, mhlawumbe uthole ukukhangisa okuthile, njll. Unamathele… zonke izinjini ezinkulu manje sezinezikhombo zezwi lakho (okuqukethwe) kuwebhusayithi yomunye umuntu. Lokho kusho ukuthi abaphethe ithrafikhi, hhayi wena.
Futhi kwenzekani uma behamba ngesisu? Kuthiwani uma ukusebenza kweseva yabo noma isoftware iba yesabeka ngendlela engaqondakali kangangokuba udinga ukubashiya. Ngenhlanhla, ungathatha okuthunyelwe kwakho kodwa, ngeshwa, awukwazi ukuthatha inkomba yakho yenjini yokusesha. Lokho kungakubeka ngemuva amasonto nezinyanga njengoba ulinde wonke umuntu ukuthi akhombe isiza sakho futhi abuyekeze zonke izinkomba zakhe kusayithi lakho. Kule mpelasonto, ngithuthele isayithi lami kwi-akhawunti ehlukile, futhi zonke izixhumanisi zami nemiphumela yokusesha iyaqhubeka nokusebenza njengoba yenzile ngaphambili. Ngingancoma futhi ukusebenzisa ukwakheka kwesixhumanisi unomphela ukuze uma uthuthela kwipulatifomu ehlukile, ungagcina ukwakheka kwesixhumanisi sakho.
Iseluleko sami kuma-blogger amasha?
Ungumnikazi wesizinda sakho sebhulogi! Ungavumeli ngisho 'i-techy' yakho ikubhalisele yona. Udinga ukuba ngumnikazi wayo, udinga ukuyivuselela, udinga ukuyilandelela. Ukuba nesizinda kufana nokuba nekheli lakho lomgwaqo, ungayibeka leyo ndawo nomhlaba ngegama lomunye umuntu? Kungani ungakwenza ngebhizinisi lakho noma ngebhulogi yakho?
Iseluleko sami kuma-blogging platforms?
Nikeza izinsizakalo zeseva yamagama. Lokhu kuzongivumela ukuthi ngibhalise igama lesizinda kumbhalisi wami engimthandayo, kepha ngikhombe igama lami leseva kusayithi lakho. Uma ngithatha isinqumo sokuhambisa ibhulogi yami noma isayithi kusikhungo esihlukile, ngingavele ngihambise isiza sami bese ngivuselela igama lami leseva. Lokhu kungaba yimodeli 'yokukhokha ngokusetshenziswa ngakunye'. Ngingagwema izinsizakalo zokubhaliswa kwegama lesizinda ngoba zingaba buhlungu ku-butt futhi kuzofanele ungeze zonke izinhlobo zokuxhaswa nokuhlanganiswa kusayithi lakho. Kepha ukuba nesiphakeli segama lesizinda esikhomba ku-http: //mydomain.com ku-http: //mydomain.theirdomain.com kulula.
Tags: domainigama lesizindaungumnikazi wegama lakho lesizinda
I-WordPress: Isipele nokubuyisela kwenye iServer
Imeyili Eqondile Esebenzayo!
Jan 9, 2007 ku-8: 59 AM
Ngiyavuma ngokuphelele, uDouglas. Kungani unikezela ukulawula kokuqukethwe wena kudalwe komunye umuntu?
Ngikhumbula lapho kwakumele ngikhokhe u- $ 72 ngesizinda sami sokuqala, kepha lezi zindleko izindleko akusona neze isizathu sokungatholi isizinda sakho. Futhi kusenamagama amaningi wokudala atholakalayo. (Futhi lezo zivela ocwaningweni lwami lwantambama-olulodwa…).
Encwadini ehluke ngokuphelele, njengoba usho imodeli yebhizinisi yabahlinzeki bendawo yokubhuloga; Ngihlale ngizibuza: i-WordPress yenza kanjani imali? Ingabe iminikelo nje, futhi ingabe lokho kuyasebenza ngempela?
Kuyangimangaza iqiniso lokuthi umnikazi we-wikipedia uyenqaba ukuba nezikhangiso ze-banner kusayithi labo. Inhlonipho!
Jan 9, 2007 ngo-2: 01 PM
Ngidlule enkingeni yokuphuza ukuthola igama lesizinda. Isizathu sokuthi ngithenge igama lami lesizinda kungenxa yokuthi ngangifuna ukuzama okuningi. Kodwa-ke, ngangibuzwa ubuhlungu bokuhamba.
Jan 14, 2007 ku-11: 30 AM
Kukhona okumnandi okuthunyelwe eShards of Consciousness ezinyathelweni ongazithatha ukuhambisa ibhulogi yakho ye-WordPress kusizinda sayo!
Jan 15, 2007 ku-11: 59 AM
Siyabonga ngokubhekisa kokuthunyelwe kwami, uDoug. Ngiyakwazisa lokho.
Ngivumelana ngokuphelele mayelana nokuba nesizinda sakho ngokushesha okukhulu uma kungenjalo kusukela ekuqaleni kokubhuloga. Uzivulela izinketho eziningi kakhulu. Futhi izinto zivame ukukhula. Ungaqala ukuzama ukuzama ukubona nje ukuthi uyayithanda, bese usebenzisa ipulatifomu yomunye umuntu. Kepha uma uthola ukuthi uyayithanda futhi ufuna inkululeko ethe xaxa, uzimemele umsebenzi omningi neminye imiphumela okhulume ngayo.